जागरण अभियानमा नेतृत्वलाई कांग्रेस कार्यकर्ताको सुझाब : पहिला नेता जागृत बन्नुस् « Pahilo News
जागरण अभियानमा नेतृत्वलाई कांग्रेस कार्यकर्ताको सुझाब : पहिला नेता जागृत बन्नुस्
प्रकाशित मिति : 14 May, 2019 7:43 am
काठमाडौं,३१ बैशाख । संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक एकता र सरकारका गलत क्रियाकलापको भन्डाफोर गर्न ७७ वटै जिल्लामा जागरण अभियान चलाएको कांग्रेस नेतृत्वलाई पहिले आफैँ जागृत हुन कार्यकर्ताले सुझाब दिएका छन् । २५ वैशाखदेखि सबै जिल्लामा एकसाथ सुरु भएको जागरण अभियानका क्रममा कार्यकर्ताले नेतृत्व सुध्रिए मात्रै पार्टी सुध्रिने बताए ।
एक महिनासम्म चल्ने जागरण अभियानमा कांग्रेसले सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएको छ । अभियानभर छरितो भेला, सदस्यता वितरण व्यापक बनाउने, स्वदेश र विदेशका सबै तहमा बृहत्तर रूपले प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । संघर्षकालका ऐतिहासिक घटनास्थलहरूमा पुगेर ‘श्रद्धा र प्रेरणा’ कार्यक्रम गर्ने, पार्टीका पुराना अग्रजहरूलाई घरमै पुगेर सम्मान गर्ने, स्वास्थ्य स्थिति, घरायसी स्थिति बुझ्नुका साथै पार्टीका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाब लिने काम पनि अभियानका क्रममा गरिनेछन् । यस्तै, सरकारका गलत कामको भन्डाफोरलाई स्थानीय तहसम्मका नेता–कार्यकर्ता पंक्तिमा पुर्‍याउने गरी कांग्रेसका कार्यक्रम लक्षित छन् ।
जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले केन्द्रको निर्देशनअनुसार जिल्लामा समन्वय गर्दै अभियानका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ । अभियानमा नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, दलित संघसहितका सबै भ्रातृसंस्थालाई पनि सक्रिय हुन पार्टीले निर्देशन दिएको छ ।
महासमिति बैठकबाट पारित नीति, कार्यक्रम र संशोधित विधानले गरेका प्रावधानबारे पार्टी कार्यकर्ता र आमशुभचिन्तकलाई प्रस्ट पार्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । साथै, राष्ट्रव्यापी रूपमा पार्टीपंक्तिमा एकता, समन्वय, हार्दिकता बढाउँदै पार्टी सुदृढीकरणका विविध गतिविधि अघि बढाउन पार्टीपंक्तिमा जागरण अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ ।
समाजमा रहेका अनेक फरक मत, संविधान या राज्यप्रणालीबारेकै विमतिसमेतलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा गाँस्न आवश्यक छलफल र बहस अघि बढाउने योजना बनाएको छ ।
जनता, मतदाता र कांग्रेस पार्टीको विभिन्न तहको नेतृत्व र सदस्यहरूबीचको सम्बन्धलाई जीवन्त र घनिष्ट बनाउन जनसंवाद गराउने योजना पनि कांग्रसले अघि सारेको छ । जनताका मुद्दामा अग्रसरता लिएर जनताको हितमा पार्टीलाई थप समर्पित गराउने । कांग्रेसको सदस्यता वितरण र विस्तार व्यापक ढंगले गर्दै पार्टीको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, नगर, टोलसम्म व्यापक ढंगले प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा हासिल भएको राजनीतिक उपलब्धि एवं समृद्धिको दिशामा गरिएका कामलाई नागरिक तहमा सम्प्रेषण गर्ने । वर्तमान सरकारका अनेक भ्रष्टाचारलगायत विसंगतिपूर्ण जनविरोधी क्रियाकलापबारे सविस्तार विवरण आमनागरिकमा प्रस्ट्याउने घोषणा कांग्रेसको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विदेशीलाई दिइएको, वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको विषय आउँदा पनि सरकारले छानबिनलाई कमजोर बनाएको विषय उठाउने ।
तराई–मधेसलगायत मुलुकको कतिपय भू–भागमा रहेका असन्तुष्टिको समाधान सूत्र विगतमा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा आवश्यक जनमत र वातावरण निर्माण गर्न दबाब दिने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा अपरिपक्वता देखिएको, सेयर बजारप्रति नकारात्मक व्यवहार र आशंका उब्जिएको, बौद्धिक समुदायप्रति अबौद्धिक टिप्पणीहरू गरिएको, अपमानजनक घटना भएको भन्दै सरकारका गलत रबैयालाई नागरिक तहमा लाने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बढेको राज्य संरक्षित बेथितिले गर्दा मुलुकको छविलाई नै असर पारिरहेको तर्क कांग्रेसको छ । साथै, तीनै तहका सरकारलाई निर्वाचनमा मतदातालाई दिलाएको विश्वासबमोजिम नागरिक हित र मुलुकको समृद्धिमा लाग्न आवश्यक दबाब दिने । ‘निर्मला पन्त’ प्रकरणझैँ महिला हिंसाका अनेक घटना र प्रवृत्तिविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गरी महिला सम्मान र सुरक्षा अभिवृद्धि गराउन पनि जागरणका कार्यक्रम आवश्यक भएको उसको तर्क छ । भूकम्प, हावाहुरी, आगलागी, बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबारे सतर्कता अपनाउन स्वयंसेवी समूह निर्माण गर्ने घोषणा पनि कांग्रेसको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई गरेको आदेश कार्यान्वयनका लागि दबाब बढाउने र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पछिल्लो समय बढेका बेथितिलाई अन्त्य गरी श्रमिकको हितका लागि दबाब दिने ।
२५ वैशाखमा अभियान उद्घाटन गर्न केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू जिल्ला पुगेका थिए । तर, सबै प्रतिनिधि आफ्ना जिल्लामा मात्र केन्द्रित छैनन् । आफू पुगेको जिल्लामा अभियानअन्तर्गतको कार्यक्रम राखेर उनीहरू छिमेकी जिल्लाका कार्यक्रममा पनि व्यस्त हुन थालेका छन् । एउटै जिल्लामा सीमित हुनुको सट्टा अभियानभन्दा अलग तालिका बनाएर पनि उनीहरू सक्रिय छन् । ‘म सिन्धुलीका लागि खटिए पनि भोजपुर, उदयपुर, मोरङसहितका जिल्लाका कार्यक्रममा पुगिसकेँ,’ डा. रामशरण महतले भने, ‘आफू खटिएको जिल्लामा पनि केन्द्रको तालिकाअनुसार भेला, गोष्ठी, प्रशिक्षणसहितको कार्यक्रम गर्दै छौँ ।’ धादिङ पुगेका प्रदीप पौडेलले अभियानको कार्यक्रम कर्मकाण्डी हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शीर्ष नेताहरू फर्किए पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू जिल्लामै सक्रिय रहेको बताए । तर, जिल्लामा अभियानको उद्घाटन गरेपछि केही केन्द्रीय प्रतिनिधि काठमाडौं आएका छन् । पार्टी केन्द्रले एक महिनासम्म जिल्लामै बसेर अभियानको नेतृत्व गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
नेताहरूलाई कार्यकर्ताका प्रश्नैप्रश्न
वाइडबडी खरिद, फोरजी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध पार्टी किन कडा ढंगले बोल्न सकेन ? सरकारका गलत क्रियाकलापमा मूकदर्शक किन बनिरहेको छ ? नेताहरू प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाउनुस् ।
पार्टी जागृत बनाउन जिल्लाजिल्लामा आउनुभएको छ, तर तपाईंहरू आफैं अहिलेसम्म किन जागृत हुनुभएको छैन ? पहिले आफैँ जागृत हुनुहोस् अनि हामीलाई सिकाउनुस् ।
हामीलाई पार्टी एकढिक्का बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्छ, तर तपाईं नेतृत्वमा बस्ने नेताहरू सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताहरू किन गुटबन्दी गर्नुहुन्छ ? पहिले केन्द्रमा आफैँ मिल्नुस्, ज–जसको गुट छ त्यो अन्त्य गर्नुस् ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्देशन दिनुहुन्छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश समितिसमेत किन बनाउनुभएको छैन ? वडा र प्रदेश भेला गर्नुअघि संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार समिति बनाउनुस् ।
गुटबन्दी गरेर भ्रातृ संस्थाहरूलाई पंगु किन बनाउनुभयो ? नेविसंघलाई व्यवस्थित गर्नुस्, तरुण दललाई विस्तार गर्नुस्, महिला संघलाई सक्रिय बनाउनुस् ।
निर्वाचनका अन्तर्घातीलाई अहिलेसम्म किन कारबाही गर्नुभएन ? पार्टीमा यसरी नै अनुशासन कायम हुन्छ ? अनुशासनहीनहरूलाई कारबाही गर्नुस्, १४औँ महाधिवेशनको कार्यक्रम सुरु गर्नुस् ।
के सुझाब पाए जिल्ला खटिएका नेताले ?
पार्टीमा एकता होस्, नेता सुध्रिऊन् भन्ने सुझाब आयो : डा. रामशरण महत, सिन्धुली
पार्टी त हामीले बचाएर राखेका छौँ, नेतृत्व नै सुध्रियोस्, पार्टीभित्र एकता हुनुपर्‍यो भन्ने सुझाब कार्यकर्ताको छ । पार्टीभित्र एकमत हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । जागरणको आवश्यकता कार्यकर्ता तहमा भन्दा पहिला नेतृत्वलाई जरुरी भएको धेरै साथीको भनाइ छ ।
सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध पार्टी बोलेन भन्ने गुनासो : चन्द्र भण्डारी, कालिकोट
राष्ट्रियताको इन्जेक्सन दिएर सरकार बन्यो । तर, सरकारको क्रियाकलाप देखेर जनता निराश छन् । यस्ता विषयमा पार्टी किन नबोल्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो जागरण अभियानमा उठेको छ । कांग्रेस यो अवस्थामा पनि आपसी मनमुटावमा लागेकाले पार्टीको चेत फर्कियोस् भन्ने साथीहरूको सुझाब छ । कांग्रेस अब नेतृत्व परिवर्तनमा लाग्नुपर्छ भन्ने विषय पनि आएका छन् । निर्वाचनका अन्तर्घातीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, समान रूपमा राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्छ, एउटै व्यक्तिले सधैँ समानुपातिक कोटा पाउनुहुँदैन भन्ने मत पनि देखियो । नेतामाथि धेरै प्रश्न उठे ।
भ्रातृ संस्थाहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएको भन्दै कार्यकर्ताले आक्रोश पोखे : प्रदीप पौडेल, धादिङ
नेतृत्व सुध्रिए मात्रै पार्टी सुध्रिने सुझाब कार्यकर्ताबाट आएको छ । पहिले केन्द्रीय नेतृत्वले एकताको सन्देश दिनुपर्ने माग साथीहरूको छ । वडा समिति नै छैन, वडा भेला गर भन्ने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने, तर प्रदेश समिति नबनाउने भनेर कार्यकर्तामा असन्तुष्टि देखियो । नेविसंघ र भ्रातृ संस्थाहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएको भन्दै कार्यकर्ताले आक्रोश पोखेका छन् ।
गुटबन्दी अन्त्य गर्न नेताहरूलाई कार्यकर्ताको सुझाब : गुरुराज घिमिरे, कञ्चनपुर
अभियानमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय बढी उठेका छन् । सभापतिदेखि नेताहरू कसैले पनि गुटबन्दी गर्नु भएन भन्ने विषय कार्यकर्ताले जोडदार ढंगले उठाएका छन् । पार्टीले एकताको सन्देश दिने गरी काम गर्न सके मात्र विपक्षीलाई दबाब दिन सकिन्छ भन्नेमा कार्यकर्ता छन् ।
नेतृत्वले एकता देखाए हामी जोस देखाउँछौँ भने साथीहरूले : उदयशमशेर राणा, खोटाङ
पार्टी नेतृत्व मिलेर अघि बढ्नुपर्ने अधिकांश कार्यकर्ताको सुझाब छ । नेतृत्वमा एकता भए मात्रै आफूहरूमा जोसजाँगर चल्ने धेरै साथीको राय छ । चुनावी परिणामपछि निराश कार्यकर्तामा जागरण अभियानले उत्साह पनि भरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेको गतिविधि कार्यकर्तापंक्तिलाई बुझाउन जागरण अभियान सार्थक बनिरहेको छ ।
अभियानले कार्यकर्तामा उत्साह भरेको छ : फरमुल्लाह मन्सुर, पर्सा
अभियानले पार्टीका हरेक इकाइ सक्रिय भएका छन् । कार्यकर्ताहरूले क्षमताअनुसारको काम गर्ने भूमिका पाउँदै छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बन्यो, निर्वाचन भयो, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्यो । मधेसमै अधिकारका विषयमा भ्रम थियो । तर, संविधानका महŒवपूर्ण विषय हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौँ । कार्यकर्तामा पनि अलमल थियो । संविधानमा हिमालदेखि पहाडसम्मका जनताले पाएको अधिकारलाई हामीले बुझाउने अवसर पाएका छौँ । राजनीतिक रूपमा हामी जितेका छौँ, यही कुरा बुझाउन लागिरहेका छौँ । नयाँपत्रिकाबाट